स्नेहा झा मंगलबार, २० बैशाख, २०७९
प्रबन्ध निर्देशक हरानो
ब्रदर ग्रुप सन् १९०८ मा स्थापना भएको जापानको बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी हो । विद्युतीय सामग्रीहरू निर्माण गर्ने ब्रदरको नेपालसहित ४० भन्दा बढी देशमा उपस्थिति रहेको छ ।
ब्रदरले मल्टिफङ्सन प्रिन्टर, टाइपराईटर, फ्याक्स मेसिन लगायतका सामाग्रीहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपालमा सागर डिस्ट्रीब्युसनले ब्रदरका सामग्री भित्र्याउँदै आएको छ ।
यसै सिलसिलामा ब्रदर इन्टरनेसनल गल्फ एफजेडईका प्रबन्ध निर्देशक केनोसुके हिरानो नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । नेपाल भ्रमणको क्रममा रहेका हिरानोसँगै आईसिटी समाचारका लागि स्नेहा झाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईलाई नेपालमा स्वागत छ । नेपालको अनुभव कस्तो रहयो ?
नेपाल मलाई एकदमै मनपर्ने देश हो । यो मेरो दोस्रो भ्रमण हो । विशेषगरी साइट सिइङका लागि नेपाल सर्वोत्कृष्ट देशको रुपमा लिन सकिन्छ ।
पहिलो पटक म अन्नुपूर्ण हिमाल हेर्नका लागि आफ्नो परिवारसँग नेपाल आएको थिए । हामीले ट्रेकिङ पनि गरेका थियौँ र रमाइलो भएको थियो । यस पटक म विशेषगरी व्यवसायिक कारणले आएको हुँ ।
मलाई नेपाली खानुकरा, नेपाली मान्छे एकदमै मनपर्छ । मेरो अनुहार पनि नेपाली जस्तै देखिने हुनाले पनि एउटा छुट्टै सम्बन्ध महशुस हुन्छ । आज (शुक्रबार) बिहान एक जना नेपाली महिलाले मलाई नेपाली भनेर नेपालीमै बोल्दै थिइन् अनि मैले म जापानी हो भने ।
के को सिलसिलामा नेपाल आउनु भएको हो ?
मलाई ढेड वर्ष अघि सिंगापुरबाट दुबईमा ट्रान्सफर गरिएको थिए । त्यहाँबाट व्यवसायिक सम्बन्ध वृद्धिका लागि म नेपाल आउन प्रयास गरिरहेको थिएँ तर कोरोनाको कारण त्यो सम्भव भएको थिएन् । कोरोनाको विकराल अवस्था साम्य भएपछि म नेपाल आए ।
सागर डिस्ट्रीब्युसनसँग सहकार्य गरेर काम गर्न नेपाल आएको हुँ । नेपालको व्यवसायमा हाम्रो कम्पनीले प्रगति देखेको छ । हामी नेपालको मार्केट सेयरमा नम्बर वान छौँ ।
म पहिले नेपाली बजारको व्यवहार, क्षमता र समस्या बुझ्न चाहन्छु । यसैका लागि हामीले सागर ग्रुपसँग सहकार्य पनि गरेका हौँ । सागर डिस्ट्रीबयुसनसँगको सहकार्यले हाम्रो नेपाली व्यवसायमा पनि गति ल्याउने विश्वास छ ।
ब्रदर ग्रुपले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वातावरण संरक्षणका लागि काम गरिरहेको छ । गो ग्रीन अर्थ अवधारणामा कसरी काम गर्नुभएको छ ?
हामीले जहिले पनि पृथ्वी र वातावरणको संरक्षणका लागि काम गर्ने गर्दछौँ । मध्य पूर्वी एशियादेखि अफ्रिकासम्म सिएसआर एक्टिभिटीहरु सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ।
हामीसँग आफ्नै सेरेस (पृथ्वीको दिगो विकास र संरक्षणमा काम गर्ने) संस्था छैन् । सेरेस संस्थासँग आवद्धता नभएकै कारण हामीले सागर डिस्ट्रीबयुसनसँग सहकार्य गरेर नेपालमा सिएसआर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौं, जसअन्तर्गत हामीले वातावरणीय संरक्षणका लागि वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ ।
त्यस्तै भूमीगत प्रदुषणका निम्ति कम गुणस्तरको मसि तथा टोनर प्रयोग गर्नु सट्टा कम्पनीले गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्ने गर्दछ ।
ब्रदरले नेपालको प्रविधि विकासमा कसरी टेवा पुर्याएको छ ?
हाम्रो कम्पनी ‘कस्टुमर फर्स्ट’ भन्ने विचारमा विश्वास गर्ने गर्दछ । धेरै अग्रसर भएर काम गर्नेभन्दा पनि पछाडिबाट अरुलाई सहयोग गर्ने कम्पनीको उद्देश्य छ । त्यसकारण नेपालमा पनि विभिन्न सिएसआर कार्यक्रमहरु आयोजना गरेरै प्रविधि क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका छौं ।
ब्रदर जापानको बहुराष्ट्रिय इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी हो । ४० बढी देशमा तपाईहरूको उपस्थिति छ । नेपालमा ब्रदरका कुन कुन प्रडकहरू आउँछन् ?
नेपालमा सागर डिस्ट्रीब्युसनले ब्रदर ग्रुपका प्रडक्टहरु बिक्री गरिरहेको छ । विशेषगरी हामीले प्रिन्टिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ ।
नेपालमा ब्रदरको लेजर प्रिन्टर, डेस्कटप कम्प्यूटर, फ्याक्स मेशिन, टाइप राईटर, कम्युटर सामग्री, लुगा सिउने मेशिन, क्याराओके मेशिन, बडी बिल्डिङ मेशिन जस्ता सामान बिक्री हुँदै आएका छन् ।
ब्रदर ब्रान्डका प्रडक्टमाथि नेपाली प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
तपाईले कठिन प्रश्न सोध्नुभयो । बजार हिस्साको आधारमा हेर्दा हामी शीर्ष स्थानमा छौँ । हाम्रो सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष भनेकै टिकाउ सामग्री बनाउनु हो । त्य
सले पनि अरू देशहरुको तुलनामा नेपालमा धेरैले ब्रदरको प्रिन्टिङ सामग्रीहरु खरिद गर्ने गर्दछन् । नेपालमा धेरै ब्राण्ड एक्टिभिटीहरु गर्न नपाएता पनि टिकाउ सामग्रीको कारण नेपाली प्रयोगकर्ताको विश्वास र प्रतिक्रिया राम्रो छ ।
ब्रदरमा नेपालीले रोजगारी पाएका छन् की छैनन् ? नेपालमै कारखाना खोल्ने कुनै योजना छ ?
नेपालमा हाम्रो आफ्नै शाखा कम्पनी छैन् । हाम्रो सबै व्यवसायिक गतिविधि सागर ग्रुपबाटै भइरहेका छन् । त्यस कारण हाम्रो तर्फबाट सागर डिस्ट्रीब्युसनले थ्रुपै नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । त्यस्तै अहिलेसम्म नेपालमै कारखाना खोल्ने त्यस्तो कुनै योजना छैन् ।
बजार हिस्सामा शीर्ष स्थानमा रहे पनि नेपाल भारत, अमेरिका वा अरू देशहरु जति ठूलो नभएका कारण यहाँ कारखाना खोल्न अलि समस्यानै देखिन्छ । तर हामी सागर डिस्ट्रीबयुसनसँग सहकार्य गरेर नेपालमा काम गरिरहने छौँ ।
ब्रदरका आगामी योजनाहरू के के छन् ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
हाम्रो कम्पनी इतिहास ११० वर्ष पूरानो छ । रिप्येर कम्पनीबाट सुरु भएको ब्रदरको मूल उद्देश्य भनेको सधैँ परिवर्तनका लागि काम गर्ने हो ।
लुगा सिउने मेसिनबाट एक शताब्दी अघि सुरु भएको ब्रदरले अहिले विभिन्न प्रडक्टहरू बजारमा ल्याइसकेको छ ।
बजारको माग अनुसार परिवर्तन ल्याउन काम गर्छौं । यो हाम्रो संस्कृति नै हो । हामी परिवर्तन लयाउन हिच्किचाउँदैनौँ ।
त्यसैगरी हामीले हाइड्रोजन ब्याट्रीको विकासमा काम गरिरहेका छौँ । केही समयपछि हाम्रो पहिलो नयाँ प्रडक्टको रुपमा हाइड्रोजन ब्याट्री सार्वजनिक हुनेछ । कनेक्टिभिटीमा पनि काम गर्ने योजना छ ।
त्यस्तै हामी नेपालका लागि उपयुक्त उपकरणहरु ल्याउन चाहन्छौँ । नेपाली बजारको सुझाव, यहाँको अवस्थालाई बुझेर अघि बढन चाहन्छौँ । तत्कालै नेपालमा कुनै प्लान्ट स्थापना गर्ने मनसाय नभए पनि नेपाली जनतालाई सधैं सेवा दिन्छौं ।